1. ပျော်ရွှင်ခြင်းပွဲတော်သည်ယခုနှစ်ကုန်ခါနီးဖြစ်သည်။ လူများစွာတို့သည်နှစ်သစ်ကူးအကြိုလက်ဆောင်များကိုပြင်ဆင်ကြသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်လား သို့မဟုတ်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုလက်ဆောင်ပေးရန် ၀ ယ်ပါ ထို့အပြင်မိခင်များစွာသည်ကျောင်း၌ရှိသည့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်စရာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်သူတို့၏ကလေးများအတွက်လက်ဆောင်များကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။ လက်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ခရစ္စမတ်ထောင့်ကိုအလှဆင်အလှဆင်ပါ ၎င်းသည်ပေးသူရောလက်ခံသူအတွက်ပါစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုကိုလည်းပေးသည်။
2. ပစ္စည်းကိရိယာ စတုရန်းသေတ္တာခြုံဖို့ဘယ်လို
3. - လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပုံစံသို့မဟုတ်ရွေးချယ်သူပေးသည့်ပုံစံနှင့်ကိုက်ညီပါ။ အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ရိုးရှင်းသောအရောင်များကိုရွေးချယ်ပါ၊ ကလေးများအတွက်သူတို့သည်ကာတွန်းပုံစံများဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်လှပသောရောင်စုံပုံစံများ - လေးများသို့မဟုတ်ဖဲကြိုးများ၊ စက္ကူအရောင်နှင့်လိုက်ဖက်သောနည်းဖြင့်ရွေးချယ်ပါ တူညီတဲ့လေသံသို့မဟုတ်အရောင်ဖြတ်ခြင်း၊ အချို့လူများကပန်းများခြောက်သွေ့ခြင်း၊ လတ်ဆတ်သောပန်းများကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ အသုံးပြုနိုင်တယ် သို့သော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ guests ည့်သည်များသို့မဟုတ်သူဌေးအတွက်ဖြစ်ပါကအချိန်နှင့်သင့်လျော်မှုအရအရောင်ရင့်သော box တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
5. - ဖြတ်ထားသောထုပ်စာရွက်ပေါ်တွင်လက်ဆောင်ပုံးကိုထည့်ပါ။ ပထမထောင့်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသေတ္တာ၏ထောင့်များကို on နှစ်ဖက်စလုံးတွင်နေရာချပြီးအသုံးပြုသောပုံး၏နှစ်ဖက် and နှင့်အပေါ်ထောင့်ထိပ်ကို proportion နေရာချပါ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်အလှအပအဘို့ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအကွက်၏အရွယ်အစားအရ - သေတ္တာ၏တစ်ဝက်ကိုဖုံးရန်စက္ကူကိုယူပါ။ ထို့နောက်ကော်သို့မဟုတ်နှစ်ဖက်သုံးတိပ်ကပ်ကပ်ပါ - စက္ကူ၏အခြားဘက်ခြမ်းကိုကော်နှင့်အတူယူလာပါ။ သို့မဟုတ်နှစ်ဖက်ပါကော် - မြဲမြဲခိုင်မာမှုနှင့်သေချာမှုအတွက်ထပ်မံတိပ်ခွေ သေချာတာကလဲမကျဘူး။ အနား fit မှဗဟိုကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါလှလှပပအနားခေါက် - ပြီးတော့ပုံ၌ရှိသကဲ့သို့လျှောက်ထားပါ ပွင့်လင်းသောတိပ်ခွေကိုပူးတွဲပါ - ဖဲကြိုးများကိုပုံတစ်ပုံကဲ့သို့ချည်ထားပါ။ သို့မဟုတ်သင်အချို့သည်သင်၏ ဦး စားပေးမှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအပေါ် မူတည်၍ ၀ တ်ဆင်။ မရနိုင်ပါ။ - တစ် ဦး ချင်းကြိုက်နှစ်သက်ရာအရသွေ့ခြောက်သောပန်းများသို့မဟုတ်လတ်ဆတ်သောပန်းများကိုချည်ထားပါ။
7. ခရစ်စမတ်ကာလအတွင်း သေတ္တာများကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊ အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ထုပ်ပြီးသစ်ပင်အောက်တွင်ထားနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရရှိတဲ့လက်ဆောင်ကိုဖွင့်ဖို့ကလေးတွေပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်သေတ္တာထဲကိုလက်ဆောင်များစွာထည့်ပါ။ Santa Claus ရှိခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ လက်ဆောင်တွေယူလာ ပိုပျော်စရာကောင်းသော နှင့်အိမ်နှင့်မိသားစုများအတွက်ရုပ်သေးအောင်အခြားလမ်းအတွက် ၎င်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးနှလုံးထဲ၌ထည့်ထားသောသေတ္တာတစ်လုံးကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လုပ် လက်ခံသူသည်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်စိတ်စေတနာခံစားရမည်။ ထို့အပြင်န့်အသတ်မဲ့ဖန်တီးမှုအဖြစ်ကောင်းစွာ အဲဒီနောက်ငါတို့လိုလက်ဆောင်သေတ္တာတစ်ခုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပြင်ကြစို့ !!